Ciidammada oo howl-gal dad lagu qabtay ka sameeyay Muqdisho iyo Shabeellaha Hoose – Radio Muqdisho
Ciidammo isku-dhaf ah oo ka kooban Booliis, Nabad-sugid iyo milatari ayaa howl-gal dad lagu soo qabtay ka fuliyay degaanno ka tirsan Muqdisho iyo Shabeelaha Hoose.
Degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayay ciidamadu ka bilaabeen howl-galka, ayagoo lug ku maray dhul baadiye ah oo ka tirsan Shabeelaha Hoose, Ciidamada ayaa baaritaankooda gaarsiiyay Carbiska, Lafoole iyo Ceelasha Biyaha oo ka wada tirsan Shabeelaha Hoose.
Afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa sheegay in howl-gallada lagu soo qabtay 7 qof oo looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin ama ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo ay baaritaan ku wadaan ciidammadu.
“Howl-galkaan wuxuu ahaa howl-gal lagu soo maray degaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, Laga billlaabo degmada Kaxda ilaa Carbiska, Lafoole iyo Ceelasha Biyaha, waxaa la maray dhul “Keymo” ah” ayuu yiri Maxamed Yuusuf
Afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamadu ay gobollada kale ka fulin doonaan howl-gallo sidaan oo kale ah si maleeshiyaadka nabadda diiddan loogu tago fadhiyadooda iyo halka ay iska soo abaabulaan. Sidoo kale waxaa si joogto ah u socda howl-gallada ka soconaya gudaha magaalada Muqdisho.